Kungani inkampani ukubhalisa ibhizinisi?
Ngokwezibalo zakamuva, wonke usomabhizinisi yesibili nerejista IP ngesikhathi kuvulwa ibhizinisi zayo zokuqala (proprietorship yedwa ). Ngesikhathi esifanayo mayelana 90% osomabhizinisi ukubhalisa LLC (Limited Ugibe Company) njengoba ibhizinisi lakhe lesibili. Yini inkinga lapha? Mhlawumbe wonke umuntu kufanele nje ekuqaleni osomabhizinisi ukuvula inkampani, kunokuba IP?
Umbuzo "yini ukurekhoda uma udala ibhizinisi?" It uvuliwe futhi up-to-date. Futhi kukhona okungenani ngenxa yezizathu ezintathu.
Isizathu sokuqala uvula icala walo wokuqala, abantu abaningi nje reinsured. Ngempela, futhi yini okufanele uyenze uma bangeke bakwenze ibhizinisi ngokuzumayo? Kulesi sici, osomabhizinisi kanye ukubhalisa kulula, naseduze.
Isizathu sesibili: inkampani ukugcwalisa, osomabhizinisi imfundamakhwela uzama ukunciphisa izindleko phezulu. Ngemuva kokubhalisa IP akudingeki ukwenza imali enhloko-dolobha yabelana, eceleni kuqashwe wamabhuku ezimali ...
Isizathu sesithathu: zifiki nje abazi izinzuzo eziningi LLC.
Ukuze usize osomabhizinisi imfundamakhwela "kwesokudla" ukunquma phezu ukubhalisa ibhizinisi, ukuze uphendule lo mbuzo main: "Yini inkampani ukubhalisa ibhizinisi" Kusobala ukuthi impendulo yalo mbuzo itholakala izinzuzo inkampani.
1) nemikhawuko of yimaphi izikweletu.
izinga ewusizo kakhulu, empeleni kusho ukuthi ngisho ngabe unalo kwesigidi ukuba abakweletwayo yayo, liphendule izikweletu ingabe uyoba ku ezahlukene igalelo lalo inhlokodolobha ogunyaziwe.
2) I-kungenzeka noma yimuphi umsebenzi.
Ngaphansi komthetho, kuncike bathole imvume efanele namalayisense, LLC ungenza cishe kunoma yimuphi umsebenzi. Ngokungafani SP, i-OOO kulo mqondo, azikho ukulinganiselwa eziningi nemikhawulo, isibonelo - ukudayisa imikhiqizo utshwala ...
Zonke izintela zikhokhelwa ngesisekelo yenzuzo. Uma ibhizinisi esikhathini esithile emsebenzini isikhathi akuholeli, ngokulandelana, ngalesi sikhathi kungukuthi edonswa nezintela.
4) Londoloza umsebenzi ngokungaqondile.
Ngezinye inkampani wokumiswa asikho isidingo ukuphatha ibhizinisi yabo mathupha. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi ukuqasha umphathi professional noma umqondisi. Ngesikhathi esifanayo, asikho isidingo ngisho ukuba linqume kubo amandla ommeli. Ikhishwe umyalelo inkampani naphambili ...
5) Nweba ibhizinisi lakho.
Ngo izinkampani elinganiselwe isibopho sezomthetho babe amathuba amahle kakhulu ukunwetshwa kwalo: lawo kabusha ukukhiqiza, ukuhlanganisa nomunye elizijameleko, abatshali zimali ngaphandle ...
I isimiso ibhizinisi , amaphuzu ezibalulekile ungatholakala zibonakale. Ngokwesibonelo, isabelo impahla amalungu ibhizinisi, ukuvimbela ukudayisa esigxotsheni yayo bangaphandle wenkampani exit kusuka Umsunguli yakhe, njll
7) Ofake esungulwe practice zomthetho.
ifomu yenhlangano kanye zezomthetho Inkampani isikhathi eside futhi abelokhu esebenza ngempumelelo isibopho sezomthetho esilinganiselwe emkhakheni wezomthetho. Siyabonga lokho okwamanje ukuxazululwa ngokomthetho cishe zonke izinkinga eziphathelene imisebenzi kwezohwebo lezi amabhizinisi.
Le nkampani kungaba ithengise futhi uthenge. Abanye osomabhizinisi yimpumelelo ngisho ukwakhela lonke leli bhizinisi: ukuthenga amabhizinisi ukulahlekelwa wokwenza, emisa ukukhiqizwa yabo, bese bathengise.
Kusukela lezi zinzuzo can angabonwa ngokucacile ukuthi inkampani uma ziqhathaniswa SP is ngcono kakhulu ingashintshwa ukuze ibhizinisi. Lokhu ukuziphatha cishe noma yimuphi umsebenzi, kanye nokwenzeka ukuba sandise ibhizinisi kanye nokuheha ukutshalwa yayo ... Yini ibhizinisi inkampani yocingo? Ukuze induduzo kokuqhuba eside futhi ibhizinisi sina!
Abaxhumanisi - Ubani lowo? Nabadayisi. abaxhumanisi zezimali
Inkontileka ikalishi kwezimpahla ku tindlela tekutfutsa letehlukene
Igobolondo ukuphakama egumbini lokugezela: phansi ejwayelekile
Emahhotela aphambili e-Los Angeles: incazelo, izithombe, izibuyekezo zezivakashi
Kazantip Republic. Iyini injabulo?
Umsuka kwegama Yakovleva: imfundo, Yakovlev abadumile
Ikhekhe nge plums
Umqondisi 4 isithombe leonid Kvinikhidze, esifunda lokhu ngaye owaziyo
Inethiwekhi "ekhemisi eshibhile" e Krasnoyarsk
Izibhengezo - lokhu ... Ukuphrinta amabhanela. Ukukhangisa amabhanela